‘अहिलेको तिजैमा’ सञ्चारकर्मी कल्पना आफैं गाउँदै आफैं नाच्दै ! हेरौं भिडियो ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
‘अहिलेको तिजैमा’ सञ्चारकर्मी कल्पना आफैं गाउँदै आफैं नाच्दै ! हेरौं भिडियो !
प्रकाशित: २० श्रावण २०७५, आईतवार
श्रावण २०, काठमाडौं । हरितालिका तीजको अवसर पारेर सञ्चारकर्मी कल्पना भण्डारीले गीत सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नै स्वर र अभिनय रहेको ‘अहिलेको तिजैमा’ बोलको गीतको शब्द विपीन किरण र संगीत श्रीकृष्ण बम मल्लको रहेको छ ।
तिज भनेको विशेष गरी दिदि बहिनी भेला हुने, नाचगान गर्ने रमाइलो गर्ने पर्व भएकोले आफूले ल्याएको गीतले मनोरञ्जन दिनेमा विश्वस्त रहेको उनी बताउँछिन् । रामकुमार केसीको छायांकन राज महर्जनको कोरीयोग्राफी रहेको उक्त गीतको भिडियोको सम्पादन तथा निर्देशन टेकेन्द्र साह गरेका छन् ।
हेरौं भिडियो !
‘क्याप्टेन’ को दुई पोस्टर सार्वजनिक, यस्ता देखिए अनमोल !
किन भनिन् विष्णु माझीले जन्मकैद “जेल चलान” गरिदेउ मलाई ? भिडियो सहित
फाइनल राउण्डमा मेक्सिको सुन्दरीको यस्तो जवाफले जितायो ‘मिस वल्र्ड–२०१८’ को ताज, के थियो त उनको जवाफ ?
रमेशराजको आधा दर्जन गीतसँगै झुमे सिद्धीबासी !
चलचित्र ‘साइली’ को रमाइलो गीत ‘नाच माया’ सार्वजनिक
चलचित्र ‘मदहोस’को गीत ‘दिलको पिंजडामा’ रिलिज